Haweenka dabada weyn oo sabab u ah biya baxa dag daga marka gadaal looga tago sidaan - Hablaha Media Network
Haweenka dabada weyn oo sabab u ah biya baxa dag daga marka gadaal looga tago sidaan
HMN:- waxa jira inabadan dhalin yaro kacabanaya biyo baxa dhow ee ku imaada wakhtiga galmada aylasamaynayaan lamaanahooda taasina maha mid intabadan dumarka jec laystaan inay ninkooda durba bidhaco.
waxana sababtaasi keena inay dumarka oo aysan waligarin gariirka macaan ee baahida tirta aybiyaha ka imadaan raga,waxana hubaal ah in raga badan kooda xiligaasi aysan siisamayn karin wax galmo ah marhadii biyaha ka imadaan hadaba waxay dhalinyaro badan nasoo waydiiyeen su’alo laxirira dhinacaasi iyo ka hortaga loogabahan yahay inay sameeyaan marka raga ay isku arkaan arintaasi.
ugu horayn waxa keeni kara biyo baxa dhow ayaa ah in uu ruuxa horay u isticmaali jirey,siigo (masburation)oo ah raga biyahooda u isticmaala inay gacanta iskaga keenan waxana arintaasi keentaa inuu ruuxa biyo deg deg ku dhaco isla markasina aykaliya biyahiisa ku xiran yahin inay dhalfada wax jilicsan taabato.
maha oo kaliya cilada aykeento (masburation) ka intaasi lakiin dhakhaatiirta ayaa sheegaysa inay keento cilad dhinaca maskaxda ah oo aykamid tahay ilosho badan iyo inuu ruuxa dhac soogaro xididada dareenka.
cudurka ugu xun ee lashegay in uu keeno ayaa ah inuu alis uyahay inuu lumo(sense-ga)dareenka uuna ukacsan waayo haeenka,waxana taasi lamacno ah dawshada aflaanta galmada.
hadab waxa loobahan yahay in xiliga aad isku aragto biyo baxan deg dega ah aad laxirirto dhanka dhaqatirta si’ay kaga cawiyaan.